Fankalazana ny faha -10 taonan’ny Fikambanana Kolo - asabotsy 26 janoary 2013 - Paris (17ème)
Hiarabana ny Fikambanana Kolo ! Tohizy fa tsara loatra !
>cliquez sur la photo pour voir l'album
Sombin'ny teny fanokafana ny faha-10 taona ny fikambanana KOLO nataon'i Atoa Mamy ANDRIANARIVONY.
Tsy ny maha zanaka anay, tsy ny maha zandry anay, na ny maha zokiny anay ho an’ny sasany, na ny maha maitso volo anay na dia efa fotsy vola sy sola aza, no jerenareo na nitsaranareo anay, fa ny toerana sy ny andraikitra misy ny fikambanana KOLO eo fampiroboroboana ny teny sy ny kolontsaina malagasy aty an-dafy.
Koa fisaorana mitafotafo no atolotray ho anareo !
Ny hazo no mijoalajoala, ny fakany no tsara famikitra, ny trano no meva fijoro, ny fototra no tsara rafitra . Ary ny tao-trano tsy efan’irery.
Folo taona izao no nametrahanay : ny tenako sy I tompokolahy Jarisoa Rakotoarivelo ny fototra ijoron’ny fikambanana KOLO.
Nefa moa ny fototra tsy trano raha tsy misy ny rihana, ny rihana izay niarahan’ireo mpikambana sy ireo namana natsangana sy nokolokoloina nandritra izay taona maro izay (Zoky Ravelona, Hazavana ...).
Ary ny fototra sy ny rihana tsy trano raha tsy eo ny tafo, dia ianareo (Narivelo Rajaonarimana, Fx Maha, ary Dera Ramandraivonona ...) ary ianareo izay tonga eto manatevina ny fiarovana ny “trano KOLO”.
Tsy adino koa ireo tsy afaka fa namela hafatra ho antsika:
Ramatoa Yvette Rabetafika Ranjeva, izay nandray tsy ampisalasalana ny fikambanana kolo sy ny hetahetanay iara-miasa amin’ny REPERMAD UNESCO.
Fiaraha-miasa izay nitohy niaraka tamin’ny Ramatoa Irène Rabenoro ary Andriamatoa Ny Toky Andriamanjato izay manatrika eto.
Tsy adino koa Abel Andriarimalala, nirhy-Lanto, Rivolalao ary Malanjaona izay azonay lazaina fa tolàna manamafy ny trano KOLO.
Mby antsaina avy hatrany ary voatonona matetika ny anaran'ny fikambanana rehefa ny “teny malagasy” no resahina.
Ny antony angamba hoy izahay dia:
Voalohany : ny fampatsiahivana ary ny fampianarana ny teny malagasy amin'ny alalan'ny soratononina, izay natao koa ho fanehoana ny ratsan-kolotsaina malagasy : toy ny Soatoavina, ny zavakanto, ny haikanto, ny haifomba izany hoe : ny kolontsaina @ endriny rehetra. .
Faharoa : ny fanairana izay natao tamin'ny fanadihadihana sy ny famelaberana nitondra ny lohahevitra hoe “Tsy hiteny malagasy intsony ve ny zanantsika?” tamin'ny taona 2003.
Fahatelo : ny fanokafana ny fampianarana amin'ny hariva ao amin'ny INALCO ny teny malagasy, izay niarahana tamin'i Lanto Andrianjafitrimo sy ny mpampianatry ny CROIMA tamin'ny taona 2004.
Fahaefatra : ny fanandratana sy fanehoana ny boky malagasy.
Ary farany – Tsy adino koa ny toeran'ireo serasera samihafa toy ny vondrona BOKY, ny hetsika “Herinandron’ny teny Malagasy ao @ Facebook” izay mahavory ny malagasy eran-tany isaky ny volana martsa.
Ireo ezaka ireo dia azo lazaina ho anisan'ny fanamafisana ny tetezana izay manohy antsika amin’ny tanindrazana.
Mila fikolokoloina ny tetezana mba haharitra ary tsy ho tapaka.
Noho izany manainga ny rehetra ny fikambanana KOLO hiara-mientana hanamafy sy hampiroborobo ny teny, ny kolontsaina ary ny fanajana ny soatoavintsika.
Mino izahay, fa tsy misy mafy tsy laitra ny zoto ary izay mitambatra dia vato, izay misaraka kosa dia fasika!
Misaotra tompokolahy ary mankasitraka tompokovavy!